IMotorola P40 iya kufika ine-perforated screen kunye ne-Exynos 9610 SoC | I-Androidsis
IMotorola P40: Isiginitsha yePunch-yeScreen yefowuni eza ne-Exynos 9610 SoC
Ukuvuza kutshanje kutyhile ukuba ubuncinci ii-smartphones ze-Motorola ezizayo zinokubonisa uthotho lweeprosesa ze-Samsung's Exynos. Ulwazi olutsha ekwabelwana ngalo ngu 91mobiles utyhila ukuba I-Motorola P40 elandelayo iya kunikwa amandla yi I-chipset ye-Exynos 9610 kwiSams.
I-Motorola P40 yayihletywa ngaphambili ukuba ixhaswe yi I-chipset ye-Snapdragon 675. Nangona kunjalo, ulwazi olutsha luyakuphikisa oku kwaye lukhomba kwi-chipset yaseMzantsi Korea. Fumana ezinye iinkcukacha!
I-smartphone inamahemuhemu okuba ikhutshwe ngeendlela ezahlukeneyo ezinje nge-32GB yokugcina + 3GB RAM, 64GB yokugcina + 4GB RAM, kunye ne-128GB yokugcina + 4GB RAM.
Ukunikezelwa kweMotorola P40
IMotorola P40 iya kuba yifowuni yokuqala yenkampani ukuba ifike ngescreen esigqibeleleyo. Njengefowuni eyandulelayo I-Motorola P30I-P40 ezayo iya kuqala njengesixhobo se-Android One.Ifowuni kulindeleke ukuba ibandakanye inzwa ye-megapixel engama-48 kuseto lwayo lwekhamera ngasemva.
Ukuvuza kwangaphambili kuye kwacebisa ukuba isivamvo sayo sesibini sinokuba zii-megapixels ezi-5. Ngokungafaniyo nefowuni ye-P30, umlandeli wayo ucwangciselwe ukufika ngenkxaso yokunxibelelana kweNFC. Abantu bathetha lonto i-smartphone iza nebhetri ye-3,500 mAh. Kulindeleke ukuba ifike ngemibala eyahlukeneyo enje ngeBlue neGolide.
Akukho lwazi lufumanekayo ngomhla wokukhutshwa kweMotorola P40. Kwakhona, akukho kuvuza kumaxabiso efowuni. Inkampani yeLenovo yayisungule i-Motorola P30 kuphela e-China. Nangona kunjalo, Amarhe okuqala e-P40 abanga ukuba le fowuni iza kuvulwa ngaphandle kwe China. Kunyaka ophelileyo, ngaphandle kwe-China kuphela ye-P30 yefowuni, i-Motorola yasungula ii-smartphones P30 Qaphela kunye ne-P30 Play ezazifumaneka ngokulandelelana ngaphandle kwe China njenge Motorola One Power y Motorola Enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IMotorola P40: Isiginitsha yePunch-yeScreen yefowuni eza ne-Exynos 9610 SoC
Unikezelo olutsha lwe-LG G8 ThinQ ishiya yonke imbonakalo yeflegi ebonakalayo
Imisebenzi ye-WhatsApp engu-7 ekufuneka wonke umntu ayazi kodwa ingaziwa ngumntu wonke